I-EIBOARD Conference Interactive Flat Panel iyiphaneli yokubhala ehlakaniphile enekhamera eyakhelwe ngaphakathi nemakrofoni, esetshenziselwa kabanzi umhlangano kanye nenkomfa ye-inthanethi.
I-EIBOARD Conference Interactive Flat Panel iyiphaneli yokubhala ehlakaniphile ye-4K enekhamera eyakhelwe ngaphakathi kanye nemakrofoni, futhi iyiphaneli ye-LCD esebenzisanayo ukunika amandla ukusebenzelana okusebenzisanayo ukuze kube nokugeleza okubandakanyekayo nokungokwemvelo kwezingxoxo ukuze kugqugquzelwe ukuqamba nokucabanga, abantu baphendukela kumaphaneli asebenzisanayo. ye-whiteboarding yedijithali esekela isichasiselo samahhala, nokufaka ipeni nokuthinta. Izixazululo zebhodi elihlakaniphile le-All-in-one ziza namakhamera akhelwe ngaphakathi, imibhobho kanye nesixhumi esibonakalayo sekhompiyutha ye-pluggbale OPS eyenza iphaneli ilungele ukusebenzisana kwevidiyo okugxilile.
I-EIBOARD Interactive Flat Panel iyisixazululo sokubonisa ihhovisi esizokwenza wonke umuntu athande imihlangano futhi.
Yenza Imihlangano Yebhizinisi Isebenze Kakhudlwana
Ukusebenzisana okuphumelelayo kubalulekile ekukhuleni kwebhizinisi, futhi ubuchwepheshe obusha buyisihluthulelo sokuvumela ukubambisana.Buhlanganisa kalula imiqondo yokusebenzisana nobuchwepheshe ukuze kusebenze Ukusebenzisana+. Iphinda kabili njengebhodi elimhlophe ledijithali elinamandla nohlelo lwenkomfa, okuyenza ibe yisixazululo esifanelekile sokusebenzisana samaqembu anoma yimuphi usayizi.
Iphaneli ye-4K Ultra HD Tempered ene-Anti-glare
Iphaneli ye-LED ibonisa izithombe ze-4K Ultra HD ngombala onothile, ocacile futhi iphaneli yayo eqinile eqinile inikeza indawo ephephile kuyo yonke iminyaka ukuze ikhuthazeke futhi iveze ubuhlakani bayo. I-anti-glare surface iwukuvikela amehlo kanye nokunciphisa ukukhathala okubukwayo.
Kushumekiwe Ikhamera ye-4K enamakrofoni
Ikhamera ye-4K yamaphikseli angu-8M eshumekiwe ihambisana nesofthiwe yenkomfa yevidiyo evela eceleni, isb. Zoom, Tencent Meeting, Skype,Dingtalk nokunye. Amamakrofoni angu-6 anebanga lokuthatha elingu-8m, enza umhlangano we-inthanethi ube lula, ube lula futhi usebenze kahle.
Ukuthinta Okuphendula Ngamaphoyinti angu-20 Ngesichasiselo Esilula
Xhumana nepeni elingelona elobunikazi noma ngeminwe yakho. I-20-point touch isekela abasebenzisi abaningi ukuthi basebenze kuphaneli ngesikhathi esisodwa. Usekelo lwesofthiwe yesichasiselo esakhelwe ngaphakathi ukuze uchasise wonke amadokhumenti asebenzayo namavidiyo ngaphansi kwanoma iyiphi isistimu yokusebenza kalula futhi kalula.
Ukusebenzisana nokuzikhandla okungenamsebenzi
Amadivayisi ekilasi ayakwazi ukusebenzisana ngokuqondile nephaneli kuzo zonke izinkundla futhi abelane ngokuqukethwe ngaphandle kwentambo ngaphandle kwanoma yiluphi uhlelo lokusebenza noma ukufakwa kwezingxenyekazi zekhompuyutha ezingeziwe! Gqamisa umsebenzi womfundi futhi ukhuthaze ukusebenzisana nobuchwepheshe bethu bokwabelana ngesikrini esakhelwe ngaphakathi.
Kushumekwe i-Dual OS
I-Android OS eshumekiwe ihlanganisa inhlobonhlobo yezinhlelo zokusebenza namathuluzi, futhi ivumela kalula abasebenzisi ukuthi bachaze, bahlanganyele, futhi babambe iqhaza ngesikhathi esisodwa. I-OPS ye-plgguable ingokuzithandela kusistimu ye-Windows, esebenza ngokusebenza okusebenzayo kanye nesitoreji esinamandla.
Ukubukeka kunomklamo we-bezel enamacala amathathu emincane yendawo yokubuka enkulu nendawo esebenzayo.
Ngomklamo wokuvikela wezingxenyekazi zekhompuyutha, isivikelo sokukhiya isicabha sihlukile esidizayinelwe ukuthi singangeni manzi futhi singangeni uthuli.
Okwedlule: Itheminali Esebenzisanayo Yegumbi Lokusingatha
Olandelayo: Isikrini sokuthinta esisebenzayo se-LED
Usayizi Wephaneli ye-LED 65”, 75”, 86”
Isivikelo sokubonisa Ingilazi engaqhumi engu-4 mm
Isistimu Esebenzayo Isistimu ye-Android I-Android 8.0 / 9.0 njengokuzikhethela
I-CPU (Iphrosesa) I-Quad Core 1.5GHz
Isitoreji I-RAM 2/3/4G; I-ROM 16G/32G njengokuzikhethela
Isitoreji Imemori: 4G (8G/16G ngokuzithandela); I-Hard Disk: 128G SSD (256G/512G/1TB ngokuzikhethela)
Amapharamitha wekhamera kanye nemakrofoni
Ikhamera I-Pixel : 8.0 Mvidiyo ukulungiswa: 3840*2160Lens: Ilensi yobude obugxilile obugxilile, ubude bokugxila obusebenzayo 4.11mmDrive: Idrayivu yamahhala
Imakrofoni Uhlobo lwemakrofoni : Imakrofoni yohlelo lwedijithaliInombolo yamamaki edijithali: 6 Ibanga lokuthatha : 10 mDrive: Windows 10 idrayivu yamahhalaUkukhanselwa kwe-cho: Kuyasekelwa
Amandla Amakhulu ≤250W ≤300W ≤400W
Izimbobo zokufaka AV*1, YPbPR*1, VGA*1, AUDIO*1 ,HDMI*3(Front*1), LAN(RJ45)*1
Amachweba okukhiphayo SPDIF*1, I-Earphone*1
Amanye Amachweba USB2.0*2, USB3.0*3 (ngaphambili*3）,RS232*1,Thinta USB*2(ngaphambili*1)
Izinkinobho zomsebenzi Izinkinobho ezingu-7 kuhlaka olungaphambili ngezansi: Amandla, Umthombo,Ivolumu+/-,Ikhaya, I-PC, i-Eco
Izesekeli Ikhebula lamandla*1;Isilawuli kude*1; Ipeni Lokuthinta*1; Incwadi yeziqondiso*1 ; Ikhadi lewaranti*1; Abakaki basebondeni*1 isethi
Izinto / Imodeli No. FC-65LED FC-75LED FC-86LED
Usayizi Wephaneli 65” 75” 86”
Ubukhulu bomkhiqizo 1490*906*95mm 1710*1030*95mm 1957*1170*95mm
Ubukhulu bokupakisha 1620*1054*200mm 1845*1190*200mm 2110*1375*200mm
I-Wall Mount VESA 500*400mm 600*400mm 750*400mm
Isisindo 41kg/52kg 56kg/67kg 71kg/82kg
Ibhodi lephaneli elisebenzisanayo
Iphaneli Yokusebenzisana Kwezemfundo
Iphaneli ye-Led Interactive
Umhlangano we-Smart Whiteboard